Sooshiyaalka oo guul ka soo hoyay doorashooyinkii - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sooshiyaalka oo guul ka soo hoyay doorashooyinkii
Uppdaterat måndag 16 maj 2011 kl 14.15
Publicerat måndag 16 maj 2011 kl 12.29
Xisbiyada Sooshiyaaldimoqoraadiga iyo xisbiga Sverigedemokratiga ayaa noqday labada xisbi ee guushu ku raacday doorashooyinkii ku celiska ahaa ee xaafado ka mid ah degmada Örebro iyo nawaaxiga gobolka Västra Götaland.
Xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga ayaa guulo aad u ballaaran ka gaaray doorashooyinkii ku celiska ahaa ee ka dhacay shalayto axaddii 15-kii maajo xaafado ka tirsan degmada Örebro iyo gobolka Västra Götaland. Xaafadaha doorashadu ka dhaceen ee degmada Örebro ayuu xisbigu ku guuleeystay tiro gaarsiisan 47,1 boqolkii, halka doorashadii dhacday bishii septembar ee sannadkii 2010 uu xisbigu saami u helay 39,3.
Lena Baastad waa madaxa xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga ee degmada Örebro:
- Inkastoo aan saddex saacadood un xalay seexday dareemi maayo daal farxad daraadeed.
Gobolka Västra Götaland ayuu xisbigu ku guuleeystay 32,6, halka doorashadii ka horeeysay uu saami u yeeshay 30,9 boqolkiiba. Iyadoona ay xoghayaha xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadigu Carin Jämtin sheegtay iney aad ugu faraxsan tahay guusha xisbigeeda u soo hoyatay:
- Inkastoo ay aad u yareeyd tiradii dadyoowga codkooda ka dhiibtay doorashada, haddana waxey xubnaha xisbigayagu ka qabteen xaafadaha Örebro iyo cariga gobolka Västra Götaland intii lagu jiray ololaha doorashooyinka howlo aad muhiim u ah.
Inkastoo uu xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadigu guulo la taaban karo ka soo hoyay doorashooyinkii dhacay, haddana kuma aannu guuleeysan sidii uu garabka Casaan-cagaarku ku heli lahaa codad aqlabiyad gaarsiisan.
Marka laga hadlayo carriga gobolka Västra Götaland, waxaa guul ka soo hoyay oo noqday xisbiga miisaanka dhanka uu hadba raaco awoodda yeelan doona xisbiga Sverigedimoqoraadiga, kadib iyada oo uu meesha ka baxay xisbigii daryeelka caafimaadka Sjukvårdspartiet oo ey middaa ku kaltami jireen. Xisbiga SD ayey codadkiisu kor u kaceen gaareenna 5,8, halkii uu horay u haystay 4,4 boqolkiiba. Iyadoona uu hogaamiyaha xisbiga SD Jimmie Åkesson-na uu soo dhoweeyay natiijadii doorashada:
- Maadaama uu xisbiga daryeelka caafimaadku booskiisii baneeyay, waxaa haddaba adkeenaysaa kaalintii aan halkaa ku lahayn, maadaama uu xisbigayagu noqday midka keliya ee u dhaxeeya garabyada kala duwan ee siyaasadda isku baheeystey. Waa xaqiiq in ay iminka suurtagal inoo tahay sidaan saameeyn ugu yeelan kari lahayn siyaasadda gobolka iyo nolol-maalmeedka bulshada ku dhaqan nawaaxigaa.
Xisbiyada xulufada ku ah garabka Casaan-cagaarka ayaa iminka ku haysta aqlabiyad gaarsiisan 45,8%, halka kuwa isu-tagguna saami u heleen 42,2. Waana howl u taala xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadigu, siduu go’aan kaga gaari lahaa inuu dhiso maamul aqlabiyad leh heshiisna la galo xisbiyada kale iyo inuu dhiso maamul laga tiro badan yahay.
Magaalada Örebro ayey si kaltan ah hoggaanka degmada isugu bdeli jireen xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga iyo kan Mudaratku, halka ay iminka tahay mid u taala xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadigu inuu hago maamulka degmada saddexda sannadood ee foodda innagu soo haya.
Kent Persson waa hogaamiyaha xisbiga Mudaratka ee degmada Örebro:
- Fikirkaygu wuxuu iminka yahay in xisbigaygu noqdo xisbi mucaarad ah.
Sidee ayaa haddaba loo sharixi karaa guulaha uu xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadigu ka soo hoyay doorashooyinkaa. Iyadoona hogaamiyaha xisbigu Håkan Juholt uu si aad ah uga muuqday goobaha doorashooyinkaasi ka dhaceen mudooyinkii lagu jiray ololaha. Mise la oran karaa in Juholt uu middaa ugu wacnaa ama raad ku reebay?
Laga yaabee, ayuu sheegay caalinka magaciisa la yiraahdo Folkje Johansson oo ka howl-gala jaamicadda Gothenburg:
Haddii guud ahaan la eego labadii doorasho ee dhacey waa mid la oran karo. Ma ahan wax aan caadi ahayn in hogaamiyaha cusub ee la doortaa ay dabeeyl sidaa u macaan dhankiisa u dhacdo.